ကိုကိုဖရီးနှင့် ဘတ်လဘိုင်မွှေ သင်္ကြန် | PoemsCorner
ကိုကိုဖရီးနှင့် ဘတ်လဘိုင်မွှေ သင်္ကြန်
ပို့စ်များတင်ရန်မစောသွားပါသဖြင့် တောင်းပန်ရင်း ( မစောတာနှင့် နောက်ကျ တာ အတူတူပဲနော်)
သြော် …သင်္ကြန်နားနီးလာတော့ သင်္ကြန်သီချင်းတွေ ဟိုဒီ ကြားလာ ရပါလားနော်။ ဆရာငြိမ်းရဲ့ဒိုးသံမြိုင်မြိုင်ဂန္ထ၀င်သီချင်းတွေကမရိုးနိုင်သလို ဒီဂျေတွေရဲ့ တက်ခနို၊ ဒစ်စကို ဗားရှင်းတွေကလည်းအံ့ရောဗျာ။ ရောချက် မွှေချက်….လေ။ ထုတ်လိုက်ကြတာဗျာ။ ပြန်ရော ပြန်ကျို ပြန်မွှေ ပြန်သမ တဲ့။ ဘတ်လဘိုင်ကို လိုက်နေတာပဲ။သံစဉ်အရ စာသားအရ အနှေးဆိုရတဲ့ သီချင်းတွေလည်း ဗားရှင်းတွေ ပြောင်းလိုက်တော့ အနောက်ကကျားလိုက်သလို အူယားဖားယား ဆိုရတာ ဇိမ်ပျက်ရောဗျို့။ သူတို့ပြန်ရောမွှေသမတာမြင်တော့ ရွာဦးဘုန်ကြီးကျောင်းက ဆွမ်းကျန်ဟင်းကျန် ပြန်ရောနှောသမပြီးစားရတာအမှတ်ရတယ်ဗျာ။ အင်း…. ကိုရီးယားကားထဲက မင်းသားမင်းသမီးတွေ ကင်ချီနဲ့ထမင်းရောနယ်ပြီးစားကြတာလို အရသာတွေစုံအောင် စေတနာနဲ့ဖြစ်မှာပါ။ ဟုတ်ဘူးလားလို့။ ကိုကိုဖရီးကတော့ သူတို့တွေလို ပြန်ရောမွှေ တာမလုပ်တတ်လို့ သင်္ကြန်တွင်းမှာ ၀ီစကီလေးနဲ့ ရေခဲတုံးလေးရယ်၊ ကိုလာ လေးရယ်နဲ့ပဲပြန်ရောမွှေနေ နေရပါတယ်ဗျာ. အဟင့် ..ဟင့်“ ။ ။
ခါတော်မင်္ဂလာနှစ်ကူးသင်္ကြန်ပါခင်ဗျာ။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာပျော်ကြပါရဲ့လားမိတ်ဆွေတို့။ အဟီး. .ရေခဲချောင်းတွေကတော့ နေတအားပူလို့အရည်ပျော်ကုန်ကြပါတယ်ခင်ည။ ကိုက်ိုဖရီး ကဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ တမူထူးအောင်..ဟာဝိုင်အီထိ သွားကဲမလို့ပဲဗျ။ ဒါပေသည့် ဖွတ်ကလိဒေါ်လှက လင်နောက်လိုက်သလို ရှာမရတာနဲ့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး ရပ်ကွက်ထဲပဲေ၇ပက်ခံထွက်လိုက်ရပါတယ်။ (အမှန်က အိမ်မှာမီးမလာတော့ ချိုးစရာေ၇မရှိလို့ဂွင်ဖန်လိုက်တာပါ။အိမ်ပြန်ရောက်ဆပ်ပြာလေးပွတ်၊ ရေနှစ်ခွက်လောက်လောင်းလိုက် ရင်ရေချိုးခြင်းအမှုပြီးရောဗျို့) ကိုယ်ကိုရေပက်ချင်လာအောင်တော့ နည်းနည်းရွှမ်းလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာ ကိုကိုဖရီးတို့ဇာတာတက်ချက်က ရေပက်ခံထွက်တော့ ၇ပ်ကွက်ထဲကမိန်းမတွေဗျာအပျိုတွေရော၊ အအိုတွေရော၊အင်တွေရော တစ်ခုလပ်နှစ်ခုလပ်တွေပါ မကျန်လောင်းလိုက်ကြတာလောင်းလိုက်ကြတာ အရူးမတောင်အဆစ်ပါသေးတယ်။ ဟီးဟိ။ လောင်းကြတာရေတော့မဟုတ်ဘူးခင်ည။ ကိုကိုဖရီးကိုလူပြို လားလူအို လားဆိုပြီးလောင်းနေကြတာလေ။ တချို့ကတချို့က လူပြိုတဲ့လေ။ လမ်းလျှောက်ရင် ဆင်ထီးယဉ်သာပုံလေးနဲ့လျှောက်တာကို မူးပြီးလဲပြိုတော့မယ့်ပုံမို့တဲ့။ (တကယ်တော့ ကိုကိုဖရီးက မမူးရင်သာလဲတာပါ။ မူးရင်ဘယ်တော့မှလဲတတ်တာမဟုတ်ဘူး) တချို့ကလည်း ကိုကိုဖရီးရဲ့ တောင်ပူစာလေးပမာစူထွက်နေတဲ့ဗိုက်လေးကိုကြည့်ပြီး လူအိုတဲ့လေ။ ဗိုက်ကိုက ငါးလဗိုက်တဲ့။ အဟင့် …တားတားကိုတူတို့ပြောရက်လိုက်ကြတာဂျာ။ မဆိုသလောက်လေး သောက်လို့ထွက်လာတဲ့ဗိုက်လေးပါ။ (သောက်တာကလည်းတစ်လလုံးမှနှစ်ရက်တည်းလေ။ မိုးရွာတဲ့ရက်ရယ် မိုးမရွာတဲ့ရက်ရယ် နှစ်ရက်လေးရယ်ပါခင်ည) လေဥ ..အဲ..ဟုတ်ပေါင်… ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ဘာပဲပြောပြော ရဲမျက်မှန်မှာစိတ်ချရ….အဲ… ဘာပဲပြောပြော ကလေးတွေကောင်းမှုနဲ့ရေတော့ အလောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အီး…ကံဆိုးချင်တော့…တောက်….. ခွေးသားလေးတွေ..ဘယ်ကရေတွေနဲ့ လောင်းလိုက်မှန်းမသိဘူး။ တစ်ကိုယ်လုံးကိုနံစော်လို့ အိမ်ကျတော့ ရေတိုင်ကီဝက်လောက် ကုန်သွားတဲ့အပြင် ညကျတော့လဲ ယားလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ ဖြစ်ပုံများပြောပါတယ် အဟင့်ဟင့်။ ။
ရင်းနှီးခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်…….မူလလက်ဟောင်းကိုကိုဖရီး ( ခေတ္တ စင်ကာပူ ………. ဘုန်းကြီးကျောင်း)
In: ဝတ္ထု Posted By: ကိုကိုဖရီး Date: Jun 14, 2012
ဆေးရည်စိမ် ဘ၀များ – နရီထက်
Leave comment4Comments & 6,496 views
thz for this funny story,
By: ei lay at Jun 14, 2012
thank for making me smile.
thank for your funny story. good!!!
By: moezat at Jun 14, 2012
အခုလိုဟာဒယအသက်ရှည်ဆေးတိုက်ကျွေးပါသော ကိုကိုဖရီးအမြန်နီးပါစေဗျာ ရေဝေးနဲ့(just kidding)
ကျေးဇူးဗျို့ အခုလိုရီစရာလေးတွေတင်ပေးတဲ့အတွက် ။
By: X - ray at Dec 18, 2012
By: kyawnainglin174 at Dec 18, 2012